Mpianatra fizahantany mianatra amin'ny mpitarika Skal Bangkok | Vaovao momba ny dia any Thailandy
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Mpianatra fizahantany mianatra amin'ny mpitarika Skal Bangkok
Mpianatra fizahantany mianatra amin'ny mpitarika Skal Bangkok
mpianatra skal sy fizahantany
Ankoatr'izay manana fotoana ahafahana mifandray amin'ny mpitarika ny Skal Bangkok, ireo mpianatra fizahan-tany dia nahita maso manokana ny fomba fanaovana protokol noho ny COVID-19 any amin'ny hotely sy any am-pivoriana.
Tsy mbola kely dia kely loatra ho an'ireo mpitondra fizahan-tany ho avy ny manomboka manao tamba-jotra amin'ireo mpitondra ankehitriny.
Ireo mpianatra dia afaka nahita maso manokana ny fepetra momba ny fahasalamana sy fahadiovana ho valin'ny COVID-19.
Alao an-tsaina izany raha toa ka ny club 334 Skal rehetra maneran-tany dia tokony hanohana mpikambana 5 ao amin'ny Young Skal fotsiny.
Mpianatra fizahantany ao amin'ny MSME Business School avy amin'ny Departemantan'ny fandraisam-bahiny sy ny fitantanana fizahan-tany no nihaona tamin'ny mpitarika indostrian'ny fizahantany tao amin'ny Hotely Peninsula, Bangkok. Ny Hotely Peninsula dia manolo-tena mazava tsara fa hanome toky ny vahiny hankafy ny fotoana mahavelom-bolo sy tsy azo hadinoina ny Peninsula nefa mampiseho fa ny fiarovana, ny fahasalamana ary ny fahasalaman'ny vahinin'izy ireo sy ny mpiasa no mijanona ho lohalaharana indrindra amin'izy ireo.
Ho fanampin'ny tambajotram-pifandraisana amin'ireo mpitarika fizahan-tany, ireto mpianatra mitantana hetsika ireto dia afaka nahita maso fepetra momba ny fahasalamana sy fahadiovana marobe izay mihoatra ny fepetra ilaina takian'ny manampahefana eo an-toerana ho valiny. Covid-19 toy ny fanalavirana latabatra, takiana saron-tava ho an'ny mpiasa sy ny fizahana mari-pana ao amin'ny lobi. Ireo mpianatra koa dia nanatri-maso ny ezaka ataon'ny mpiasan'ny Hotely Peninsula ao ambadiky ny zava-misy miaraka amina fandraisana andraikitra marobe izay tsy ho tsikaritry ny vahiny.
Taorian'ny fisakafoanana antoandro, Dr. Scott Smith dia nikarakara fanaraha-maso tranokala VIP ho an'ireo mpianatra izay nahitana ny fitsidihana ny Paribatra tena miavaka, tranombakoka sy helipad amin'ny rihana faha-37. Dr. Scott, avy ao amin'ny anjerimanontolon'i Assumption, dia efa talen'ny Young Skal Bangkok nandritra ny taona maro. Namporisika ny mpianatra i Dr. Scott mba hampiasa vola amin'ny fampandrosoana arak'asa, amin'ny filazany hoe: "Tsy mbola kely dia kely ny hanombohan'ny tambajotram-pifandraisana amin'ny mpitondra ankehitriny ny mpitarika amin'ny ho avy." Young Skal dia sokajin'ny maha mpikambana ao amin'ny Skal, mifantoka amin'ireo mpianatra mianatra amin'ny programa fandraisam-bahiny sy fizahan-tany manerantany. Nanampy i Dr. Scott hoe: "Ny maha-mpikambana ao amin'ny Young Skal dia miteraka fotoana ahafahan'ny fizahan-tany mianatra tsara sy mamiratra indrindra hanatevin-daharana tambajotran'ireo matihanina mitovy hevitra aminy ary hanao hetsika izay azo antoka fa manampy azy ireo rehefa miakatra amin'ny tohatra mankany amin'ny fahombiazana izy ireo."
Andrew Wood, filohan'ny Skal Bangkok, nanolotra mpikambana Skal International ho an'ny mpianatra nanatrika ary namporisika ireo skalleagues nanatrika tamin'ny filazana hoe: “Alao an-tsaina ve raha ny club Skal 334 eran'izao tontolo izao no tokony hanohana mpikambana tanora 5 Skal fotsiny? Mety izany; hampitombo ny mpikambana maha-mpikambana antsika amin'ny 13,000 ka hatramin'ny 15,000 (+ 15%), mihena ny fihenan'ny mpikambana ao amintsika vokatry ny areti-mifindra voan'ny coronavirus, maneho ny tena fanoloran-tena hampiasa vola amin'ireo mpitarika ho avy ary koa hampihena ny salanisan'ny taonan'ny mpikambana ao amintsika fa tsy mamelombelona fotsiny ny filan'ny tanora fanahy, ny heriny ary ny hafanam-pony ao amin'ny fivorianay fa mampiditra hevitra vaovao ihany koa. Amin'ny fanaovana an'io, dia hanampy ny klioba haharaka hatrany ireo fironana farany sy hevitra vaovao, indrindra eo amin'ny tontolon'ny dizitaly mivoatra tokoa. Mahita fotoana lehibe aho miaraka amin'ny fanovana ny lalàna mifehy ny Young Skal. Andao ekena ny fanovana ary hahasoa ny kliobantsika sy ny indostrian'ny fizahantany amin'ny ankapobeny. ”
Skal, natsangana tamin'ny 1934, no fikambanana manam-pahaizana momba ny fizahantany lehibe indrindra. Ny maha-mpikambana ny Skal International dia manome fidirana amin'ireo olona sy hetsika misy ifandraisany amin'ny fampandrosoana orinasa any Thailandy sy manerana ny faritra ASEAN. Ny Skal International androany dia nanjary fikambanana tambajotran'orinasa fizahantany mahomby indrindra manerantany miaraka amin'ny mpikambana 13,000 mahery ao amin'ny Club 334 manerana ny firenena 85. Ny ankamaroan'ny hetsi-panoherana dia miseho eo amin'ny sehatra eo an-toerana, miakatra amin'ny alàlan'ny Komitim-pirenena, eo ambanin'ny elo an'ny Skal International, manana ny foibeny ao amin'ny Sekretariat Jeneraly ao Torremolinos, Espana.